မြေစံနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ. . . ~ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်
မြေစံနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ. . .
Monday, October 12, 2009 0000 No comments
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့
ကျွန်တော်တို့ဟာ မကြာခင်က ဘိလပ်ကို သွားပြီး ဗမာပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေး ရရာရကြောင်းကို နည်းလမ်းရှာတဲ့ သဘောနဲ့ သွားခဲ့တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကိုလဲ လာမည့် ဧပြီလမှာ လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို မဟုတ်ဘဲ၊ ဗမာပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေး ကံကြမ္မာကို ဖန်တီးလာမည့်တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်။ အဲဒီ တိုင်းပြပြုလွှတ်တော်မှာ ပါတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကစဉ့်ကရဲ ဖြစ်လျှင် ဗမာ့ပြည် နစ်နာဖို့ဘဲ၊ တိုင်းပြည်လွတ် လပ်ရေး ထိခိုက်ဖို့ရှိတဲ့အတွက် အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။
ကျုပ်တုိ့က ဘိလပ်က ပြန်လာတဲ့နောက် ရှမ်း၊ ဂျင်းဖော၊ ချင်းစတဲ့ တောင်တန်းနယ်သားများနှင့် ညီညွတ်ဖို့လုပ်ခဲ့ ရတယ်။ အဲသည်က ပြန်လာတဲ့အခါ သပိတ်အရေးများကို ဖြေရှင်းရတယ်။ သပိတ်အတွက် ကျုပ်တို့လုပ်ငန်းတွေ နှောင့်နှေးပြီး လုပ်စရာတွေကို သိပ်ပြီး ဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး။ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေ ဆောင်ရွက်ချင်သလောက် မ ဆောင်ရွက်နိုင်ဘူး။
တောင်သူလယ်သမားတွေဟာ ဗမာပြည်မှာ လူအများစုဖြစ်တယ်။ လွတ်လပ်ရေး ရတဲ့အခါမှာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လွတ် လပ်ရေး ပါလာမယ်။ တောင်သူ လယ်သမား လူများစုရဲ့ အခွင့်အရေးမပါတဲ့ လွတ်လပ်ရေးဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး လို့ ယူဆတယ်။
အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ကျုပ်တို့လက်ထဲကို အာဏာပေးသင့်သလောက် ပေးထားသော်လဲ အချို့ မလုပ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စ တွေလဲရှိတယ် လုပ်နိုင်တာလဲရှိတယ်၊ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာ ငွေရေးကြေးရေးလိုတယ်။ ဒီငွေရေး ကြေး ရေးဟာ ခင်ဗျားတို့တိုင်းသူပြည်သားများထံမှ ကောက်ခံတဲ့ အခွန်တော်တွေဘဲ။ ဒီအခွန်တွေကောက်တာဟာ မှန် သလား၊ မှားသလား မစဉ်းစားသေးတော့ ဒီအတိုင်း ဖြစ်နေတယ်။
၀င်ငွေ ထွက်ငွေ မမျှတ
အစိုးရရဲ့ရံပုံငွေဟာ ကုဋေ ၂၀ သာရှိပြီး အသုံးစရိတ်က ကုဋေ၄၀ဖြစ်နေတယ်။ စစ်မဖြစ်မှီတုန်းကလို ၀င်ငွေနှင့် ထွက်ငွေဟာ မမျှတသေးဘဲ၊ ခင်ဗျားတို့ကို အမတော်ကြေးငွေ များများပေးချင်ပေမဲ့ ငွေမရှိလို့ မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အ မတော်ကြေး လျှော်ဖို့ပြောတယ်။ လျှော်လိုက်ယင် ခင်ဗျားတို့ကို ထိခိုက်မှာဘဲ၊ သို့သော် သက်သာဖို့ လမ်းကိုရှာ နေတာဘဲ။
စစ်အစိုးရ လက်ထက် ဂျပန်စက္ကူတွေ တန်ဖိုး မရှိလို့အင်္ဂလိပ်က ကြေညာစဉ်က ထုတ်ချေးခဲ့တဲ့ အမတော်ကြေး တွေ လျှော်ပစ်ဖို့ ကျုပ်တို့အရေးဆိုထားတယ်။ ရစရာလမ်းရှိတယ်။ မရလို့ရှိယင်လဲ ခင်ဗျားတို့မပေးဘဲ နေလို့ရပါ တယ်။ မတတ်နိုင်ပါဘူး(သြဘာသံများ)။
သပိတ်ကိစ္စ၊ လယ်သမားကိစ္စ၊ အလုပ်သမားကိစ္စ၊ တိုင်းပြည်ကိစ္စတွေနဲ့ ဟိုပြေးဒီလွှားနဲ့ အင်မတန် ခေါင်းကြိမ်း တယ်။ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင် လုပ်တာ ခင်ဗျားတို့က သိပ်ပြီး စည်းစိမ်ရှိတယ်ထင်တယ်။ ကျုပ်အဖို့ ကျားမြီးဆွဲမိ လို့သာ ဆက်လုပ်နေရတယ်။ သို့သော် လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အထိ ဆက်လုပ်ပြီး လွတ်လပ်ရေး ရပြီးတဲ့နောက် အ နားယူရမလား မပြောတတ်သေးဘူး။ တနှစ်အတွင်း လွတ်လပ်ရေး ရဖို့ အကြောင်းမြင်တယ်။ အိန္ဒိယပြည်ကိုယ် တွေ့၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လမှာ အာဏာလွှဲဖို့ အင်္ဂလိပ် အစိုးရက ကြေညာတယ်
ကျုပ်တို့ ဗမာပြည်မှာလဲ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ပြီးတဲ့နောက် မေလမှာ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖွဲ့ညီလာခံကို ကျင်းပ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော် နောက် သုံးလေးလကြာမှာ လွတ်လပ်ရေး သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ အ ကြောင်းရှိတယ်။ အဲသည်လို တနှစ်အတွင်း လွတ်လပ်ရေးရခဲ့လို့ရှိလျှင် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အခြေအနေကို ဒီထက် ကောင်းအောင် လုပ်ပေးနိုင်မယ်။
ခုအခါမှာတော့ ဆင့်ပါးစပ် - နှမ်းပက်သလို ဖြစ်နေတယ်။ လုပ်ချင်သလို မလုပ်နိုင်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့လိုချင်ကြသလို မြေစံနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲချင်တယ်။ လယ်ပိုင်ရှင် စံနစ်ကို ဖြုတ်ပစ်နိုင်ဖို့ဘဲ။ အဲသည်လို လုပ်ချင်ပေတဲ့မဖြစ်နိုင် သေးဘူး။ ဇော်ဂျီဝိဇ္ဇာတွေလို ခင်ဗျားတို့ လိုချင်တာ တမုဟုတ်ခြင်း လုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ အရေးကို ကျုပ် ထက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ လူရှိယင် ကျုပ်ဖယ်ပေးဖို့အသင့်ဘဲ။ ခင်ဗျားတို့ အရေးတွေကို ပြောချင်လျှင် ဆိုင်ရာအဖွဲ့ က တဆင့်ကျုပ်တို့ အစိုးရအဖွဲ့ကို ပြောလျှင် တတ်နိုင်သလို ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ မခဲယဉ်းပါဘူး။
နောက်ဆုံးပြောလိုတာက၊ ခုလာမဲ့တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်မှာ တကယ်ဆောင်ရွက်မဲ့လူတွေကို ဖ-ဆ-ပ-လ မှ ရွေးခယ်ပေးမယ်။ အဲဒီအမတ်တွေကို ခင်ဗျားတို့က ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာ ခရီးပန်းတာကို ဂရုမစိုက်ဘဲ အ ခက်အခဲများကို သည်းခံပြီး ဖ-ဆ-ပ-လ ရဲ့ အမတ်လောင်းများကိုဘဲ မဲပေးကြမယ်ဆိုယင်၊ ဗမာပြည်ကြီးဟာ တ နှစ်အတွင်း လွတ်လပ်ရေး ရမှာဘဲ (တခဲနက် သြဘာသံများ) ။ ။